logmein အကြောင်း ( အဝေးမှကွန်ပျူတာကို ထိန်းသည့် software နှင့် အသုံးပြုပုံ)
Myitkyina Online :: နည်းပညာ :: Information Technology
iloveyou on Thu Aug 19, 2010 3:59 pm
ကျွန်တော်က ပထမဦးဆုံးပြောမယ့် အကြောင်းကတော့ logmein ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေး အကြောင်းပါ။ ဒီဆော့ဝဲလေးက နိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကွာဝေးနေပါစေ လှမ်းပြီးတော့ ကိုယ့်ရှေ.မှာသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာလိုမျိုး အဝေးကနေ ကိုင်တွယ်ပြီး ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်း ပြင်ဆင်ပေးလို. ရပါတယ်။
တခုကြိုပြောချင်တာက ဒီဆော့ဝဲလေး အကြောင်းကို နားလည်သွားရင် ဘယ်သူကိုမှသွားပြီး ဒုတ်ခမပေး ဖို.ပါဘဲ။ အဲဒီအတွက် ကြိုပြီး ပြောထားပရစေ။
* www.logmein.com ကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Download logmein free ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်လေးကို ကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အီးမေးလ် တို. ဘာညာတို. ရိုက်ပြီး အကောင့် ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Go ကို နှိပ်။
* ပြီးရင် add computer ကို ထပ်နှိပ်။ ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။
* ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို Run လိုက်ပါ။ Next => I agree => typical => Next =>Next=>
* computer access code ဆိုပြီးတောင်းရင် ပေးချင်တဲ့ password 8 လုံးပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာလည်း အဲ ဒီ 8 လုံးပဲ ပြန်ရိုက်။ ကိုပေးထားတာတော့ မှက်ထားဦးနော်။
* Email တောင်းရင် ခုနက အကောင့် ဖွင့်တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ အီးမေးကို ပြန်ထည့်။ password ကလဲ အကောင့်ဖွင့်တုန်းကပေးတဲ့ password ပဲအင။ ပြီးရင် Next ကို မနှိပ်နဲ.ဦး။ logmein freee ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ဦး။ ပြီးမှ Next လုပ်။
* အင်စတောလုပ်ပြီးသွားရင် Restart ချရလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ။ Task Bar ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ ခွေးခြေရာ ပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
* အဲဒီ ကွန်ပြူတာကို ဖွင့်ထားပြီး တခြားကွန်ပြူတာကနေပြီး အင်တာနက်က www.logmein.com ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို ပြန်ဝင်
* ၀တ်ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက် ထိတ်နာမှာ Email မှာ ကိုယ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ အီးမေးလ် ရိုက်ထည့် ၊ ပြီးရင် Password ပေါ့။ Enter ။
note: လျှောက်သွားရင်းစိတ်ဝင်စားလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ....
ရေးသားချက်များ : 36
Start Date: : 2010-08-14